ny tan-dalàna | Apg29
Aoka tsy hisy hamitaka anareo na amin'inona na amin'inona.
Ny fihavin'ilehiny dia ny asan'i Satana sy nanao tamin-kery lehibe sy ny lainga famantarana rehetra sy ny fahagagana, ary ny amin'ny tsi-fahamarinana rehetra seductions eo amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy.
Nanazava A zava-miafina
Indro, lazaiko aminareo ny zava-miafina; tsy ny rehetra isika, dia matory [maty], fa isika, dia hovana rehetra, fa vetivety, ao ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany. Fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lò intsony, ary isika hovana.
Aza tsy hahalala ihany
Fa tsy tianay tsy, ry rahalahy, mba ho fantatrareo ny momba ireo izay efa nodi-mandry [maty], mba tsy hahalahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana [izay tsy voavonjy]. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodi-mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy.
Fa izao no holazaiko aminareo ny tenin'ny Tompo: isika, izay velona ka mbola mitoetra ho amin'ny ho avy 'ny Tompo, na inona na inona dia tokony ho tonga eo anatrehanao ireo izay efa nodi-mandry [maty]. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny didy fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra antso 'Andriamanitra, ary aloha ny maty ao amin'i Kristy no hitsangana.
Avy eo isika, izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka. Ary toy izany foana isika, dia ho any amin'ny Tompo.
Koa mifampahery amin'izany teny izany.
Times sy ny fizaran-taona
Fa raha ny fotoana sy vanim-potoana, ry rahalahy, dia tsy misy ilaina ny hanoratako aminareo. Fa fantatrareo tsara fa ny andron'ny Tompo dia tonga toy ny mpangalatra amin'ny alina. Noho izany, raha manao hoe: Miadana sy mandry fahizay, dia tonga tampoka ny loza nanjo azy ireo toy ny födslosmärtan ny vehivavy efa hiteraka izy, dia ho afa-miala.
Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, fa izany andro izany mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny amin'izao andro izao. Tsy an'ny alina, na maizina.
Koa aza mba matory tahaka ny sasany, fa aoka hiambina ka hahonon-tena. Fa izay matory, dia matory amin'ny alina; ary izay mamo dia mamo amin'ny alina.
Fa isika an'ny andro tokony ho hahonon-tena, niakanjo finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay maty hamonjy antsika, mba isika, na mijery, na matory isika, mba hiara-belona aminy.
Noho izany, mifankahery sy uppbygg hafa, tahaka ny ataonareo ihany.
Aza very tony
Kanefa mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, ny an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, fa ianao no tsy mba toy izany no mifady hanina, very ny lohany sy lasa raiki-tahotra, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na misy taratasy, dia toy izay iraka avy aminay toy ny andron'i Kristy dia akaiky.
Aoka tsy hisy hamitaka anareo na amin'inona na amin'inona. Fa izany andro izany dia tsy, raha tsy ny fako no [handeha handika "lasa"] dia efa natao, dia ny lehilahy ny ota, zanaky ny fahaverezana, efa naseho, Izany Fanahy izany no mpanohitra sy manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na ivavahana, ka dia mipetraka teo an-kianjan'ny tempoly 'Andriamanitra ho Andriamanitra, ary milaza ny tenany ho Andriamanitra.
Tsy fantatrareo va fa Izaho efa nilaza mahatsiaro anareo izany, fony aho mbola teo aminareo? Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana, mba aloha mba hampisehoana azy amin'ny fotoana. Fa ny zava-miafina ny fandikan-dalàna dia efa am-piasana, saingy mandra izay misakana ankehitriny nesorina. Ary amin 'ilay tena mpandika lalàna no nambara, dia izay tian'i Jehovah no hamono amin'ny fofonain'ny vavany, dia handringana ny hita miverina.
Ary noho izany Andriamanitra dia handefa azy fiàsan'ny fahadisoan-kevitra aminy hinoany ny lainga, mba hitsarana, ireo rehetra izay tsy nino ny marina, fa efa nisy ny nankasitraka ny tsy marina.